OLAC Record: Fonds Denise Bernot, birman, 1964, bande 023, face A
Title: Fonds Denise Bernot, birman, 1964, bande 023, face A
Abstract: Un homme lit un texte (en birman, en répétant deux fois chaque phrase) racontant: 1. son difficile voyage en bus (de0à 6mn). 2. ses autres expériences de transports (autocar, voiture, vélo, bateau) et les sons de ces véhicules (de6à 12mn). 3. les transports en bateau, les ports et le vocabulaire associé (notamment entre Yangon et Thanyin) (de 12 à 27mn). 4. les écoles publiques de différents quartiers de Rangoun (de 27 à 37mn) 5. une journée typique à l'école primaire en 1964 (de 37 à 48mn) 6. des réformes de l'école primaire à Rangoun, du nombre d'élèves par enseignant, des examens, des prix des manuels, des fournitures scolaires, du nombres d'écoles à Rangoun, du nombres d'élèves et d'enseignants en 1964 (de 48mn à 1h04mn).
A man readsatext (in Burmese, repeating each sentence two times) explaining: 1. his epic bus trip (from6to 12 min.). 2. other experiences in public or private transport (car, bike, boat) and the sounds of these different vehicles (from6to 12 min.) 3. boat transport, ports and the vocabulary associated (especially between Yangon and Thanlyin) (from 12 to 27 min.). 4. different public schools in different wards of Rangoon (Hledan) (from 27 to 37 min.). 5.atypical day inapublic school in 1964 (from 37 to 48 min.). 6. reforms of the primary school system, number of students inaclass, exams , price of manuals, number of schools in Rangoon, number of students and teachers in 1964 (from 48 min. to 1h04 min.).
အမျိုးသားတဦး ဖတ်စာအုပ်ကိုဖတ်သည် ။ (မြန်မာဘာသာဖြင့် ဝါကျတကြောင်းကို နှစ်ကြိမ်စီ ရွတ်ဆိုသည်။ ) ရှင်းပြချက်မှာ- ၁။ သူ၏ ကြာရှည်သောဘတ်စ်ကားခရီး (၆ မှ ၁၂ မိနစ်ထိ) ၂။ ပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှေ)နှင့်ပတ်သက်သော အတွေ့ အကြုံများနှင့် ၎င်းယာဉ်အမျိုးမျိုးတို့၏အသံများ ၃။ ရေကြောင်းပို့ဆောင်မှု၊ ဆိပ်ကမ်းနှင့်ဆက်နွယ်သောစကားလုံးအသုံးအနှုန်းများ (အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်နှင့် သံလျင်အကြား) (၁၂ မှ ၂၇ မိနစ်ထိ) ၄။ ရန်ကုန်မြို့၏ ရပ်ကွက် မြို့နယ်အသီးသီးမှ အစိုးရကျောင်းများ (လှည်းတန်း) (၂၇ မှ ၃၇ မိနစ်ထိ) ၅။ ၁၉၆၄ ခုနှစ် အစိုးရကျောင်းတကျောင်း၏ တနေ့တာ (၃၇ မှ ၄၈ မိနစ်ထိ) ၆။ မူလတန်းပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲမှုများ၊ အတန်းတတန်းအတွင်းရှိ ကျောင်းသားဦးရေ စာမေး ပွဲများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစျေးနှုန်းများ၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၏ ရန်ကုန်မြို့ရှိကျောင်းအရေအတွက်၊ ကျောင်းသား နှင့် ဆရာအရေအတွက် (၄၈ မိနစ် မှ ၁ နာရီ ၄ မိနစ်ထိ)
Alternative Title: Fonds Denise Bernot, Burmese, 1964, tape 023, side A
Description: Un homme lit un texte (en birman, en répétant deux fois chaque phrase) relatant les circonstances difficiles dans lesquelles il attend et prend le bus, dans quelle direction il se dirige, où il s'arrêtera (de0à 6mn). Ensuite, il raconte des expériences de transports, dans lequel ilapris l'autocar, la voiture, le vélo, le bateau; à cette occasion il évoque les sons de ces véhicules (cloche, moteur, klaxon, sonnerie, son de la grue sur les docks-onomatopées) (de6à 12mn). Il continue en parlant des bateaux, des ports et du vocabulaire associé (notamment entre Yangon et Thanyin), de la manière d'y parvenir (à pied). Il évoque le mariage d'un musulman conducteur du bateau avec une Birmane, des musulmans qui forment le gros de l'équipage. Il évoque les conditions de traversée, les boissons qu'on peut acheter, assis sur des nattes, abrités sous des bâches en cas d'orage, des dangers liés aux tempêtes (de 12 à 27mn). Il parle ensuite des écoles publiques de différents quartiers de Rangoun (Hledan), des enseignants âgés, de leurs conditions de travail (mutation, salaires), des besoins de la nation en enseignants du primaire. (de 27 à 37mn) Il poursuit sur les horaires d'écoles, le serment d'allégeance, les prières et les5serments nationalistes que font les enfants le matin en arrivant, de leur cantine, du sport, de l'hymne nationale qu'ils chantent le soir avant de rentrer. Des comités de parents des écoles de Pyay road, des différentes associations (de 37 à 48mn) Il parle ensuite des réformes de l'école primaire à Rangoun, des hauts fonctionnaires en charge au ministère de l'Education, de l'école de Htantabin, de la rectrice Daw Thet, des étudiants, de la manière dont ils s'interpellent, des salaires du personnel enseignant. Il continue au sujet d'un journée type d'un élève, de l'éducation religieuse en début de journée, du nombre d'élèves par enseignant, des examens mensuels dans les écoles de Rangoun, des prix des manuels, des fournitures scolaires, du nombres d'écoles à Rangoun, du nombres d'élèves et d'enseignants en 1964, des mesures prises par le gouvernement révolutionnaire pour enrichir les connaissances des élèves. (de 48mn à 1h04mn).
A man readsatext (in Burmese, repeating each sentence two times) explaining the harsh circumstances in which he has to wait for and take the bus, the direction he is heading for, where he is going to stop (from0to6min.). Then, he explains circumstances where he had to take the bus, driveacar, rideabike, takeaboat. He imitates the sounds of different vehicles and machines (bell, engine, horn, ring, dock crane) (from6to 12 min.). He goes on talking about boats, ports and the vocabulary associated to theses places (especially between Yangon and Thanlyin), the way to get there (on foot). He then talks about the wedding of the boat driver, who is Muslim,withaBurmese lady; the crew is mostly composed of Muslims. He describes the journey on the boat, the drinks you can buy onboard, how passengers sit on mats, sheltered under tarpaulin when it rains, the dangers of sea storms (from 12 to 27 min.). He then reads about different public schools in different wards of Rangoon (Hledan), about old teachers, about their working conditions (transfers, salaries), the national need of hiring more primary teachers (from 27 to 37 min.). He continues about the school hours, the pledge of allegiance to the flag, the prayers and the5oaths to the nation that children take during the morning assembly, the dining hall, the different sport activities, the national anthem they sing in the evening before they go back home, the different parent associations on Pyay road, and other associations (from 37 to 48 min.). Then he reads about the reforms of the primary school system, the high-ranked civil servants in charge at the Ministry for Education. He then reads about the school of Htantabin, the head of school Daw Thet, the students, the way students talk to each other, the salaries of the teachers there. He describesanormal day ofastudent and then explains the religious teaching in the mornings, the number of students inaclass, monthly exams in Rangoon streets, the price of manuals and schoolbooks and workbooks, the number of schools in Rangoon, the number of students and teachers in 1964, the measures taken by the Socialist government to enrich the knowledge of the students (from 48 min. to 1hour and4min.).
အမျိုးသားတဦး (မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖတ်စာအုပ်ပါစာများကို ဝါကျတကြောင်းကို ၂ ကြိမ်စီ) ဖတ် ကြားခြင်း။ သူသည် ခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကားစီးရန်စောင့်ဆိုင်းပုံ၊ စီးနင်းပုံ၊ သူ၏ ခရီးလမ်းကြောင်း ဦးတည်ပုံ၊ အဆုံးသတ်ပုံ၊ သူခရီးလမ်းတလျှောက် ရင်ဆိုင်ရသော ခက်ခဲသောအခြေအနေများကို ရှင်းလင်းပြသွားသည်။ (၀ မှ ၆ မိနစ်ထိ) ထို့နောက် ဆက်လက်ရှင်းပြသည်မှာ သူသည် မည်သည့်နေရာမှ ဘတ်စ်ကား စတင်စီးပုံ၊ ကားတစီး မောင်းနှင်ပုံ၊ စက်ဘီးတစီး စီးနင်းပုံ၊ လှေတစင်း စီးပုံ စသည်တို့၏အခြေအနေများဖြစ်သည်။ သူ့ အနေ ဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်အမျိုးမျိုးတို့၏ ကွဲပြားခြားနားသောအသံများကို အသံတုပြုလုပ်၍ပြ သည်။ (၆ မိနစ်မှ ၁၂ မိနစ်ထိ) သူသည် ဆက်၍ လှေများ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ နှင့် ၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သောစကားလုံးအသုံးအနှုန်းများ (အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်နှင့်သံလျင်ကြား ရေကြောင်းဖြင့်သွားလာခြင်း)ကိုပြောသည်။ ခြေလျင်ဖြင့် ထို နေရာသို့ရောက်ရှိပုံတို့ကိုပြောကြားသည်။ ထို့နောက်သူသည် လှေမောင်းသူ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် အမျိုးသားနှင့် မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးတို့၏ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲအကြောင်းကိုပြောသည်။ ၎င်းလှေ အဖွဲ့ သားအများစုမှာ မွတ်ဆလင်များဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းသည် သင်္ဘောခရီးစဉ်ကို ပုံဖော်ပြောဆိုသည်။ သင်္ဘောပေါ်တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်သော ရေနှင့် ဖျော်ရည်များ၊ ခရီးသည်များ ဖျာပေါ်တွင်ထိုင်ကြပုံ၊ မိုးရွာ သောအခါ တာပေါ်လင်အမိုးများအောက် ဝင်ရောက်ခိုကြပုံ၊ ပင်လယ်မုန်တိုင်း၏အန္တရာယ်များကိုလည်း ဖော်ပြသည်။ (၁၂ မှ ၂၇ မိနစ်ထိ) ထို့နောက် သူသည် ရန်ကုန်မြို့ လှည်းတန်းရပ်ကွက်အသီးသီးမှ အစိုးရကျောင်းအမျိုးမျိုးအကြောင်း ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြသည်။ ဆရာများအကြောင်း၊ ဆရာများ၏ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ (နယ် ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ လစာ)နှင့် နိုင်ငံနှင့်အဝှမ်းလိုအပ်နေသော မူလတန်းပြဆရာများငှားရမ်းမှုအကြောင်း တို့ဖြစ်သည်။ (၂၇ မှ ၃၇ မိနစ်ထိ) ဆက်လက်၍ကျောင်းချိန်များ၊ နိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုခြင်း၊ ဘုရားရှိခိုးခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော် သစ္စာ ဓိဌာန်ငါးချက်တို့အား ကျောင်းသားငယ်တို့ နံနက်ခင်းစုရုံးချိန်တွင်ပြုလုပ်ပုံ၊ ထမင်းစားခန်း၊ အမျိုး မျိုးသောအားကစားဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ညနေကျောင်းဆင်းချိန် အိမ်မပြန်မီ နိုင်ငံတော်သီချင်း သီဆိုပုံများနှင့် ပြည်လမ်းပေါ်ရှိ အမျိုးမျိုးသောမိဘအသင်းအဖွဲ့များနှင့် အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများ အကြောင်းပြောဆိုသည်။ (၃၇ မှ ၄၈ မိနစ်ထိ) ထို့နောက် အခြေခံမူလတန်းပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲမှုများအကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဦးဆောင်နေသော အဆင့်မြင့်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအကြောင်းဖတ်ပြသည်။ ဆက်လက်၍ ထန်းတပင် ကျောင်း၏ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်သက်၊ သူမ၏ကျောင်းသားများ၊ ကျောင်းသားများတဦးနှင့်တဦး ပြောဆိုဆက်ဆံပုံနှင့် ဆရာ/ဆရာမများ၏လစာများအကြောင်းကို ဖတ်ပြသည်။ ကျောင်းသားတဦး၏ တနေ့တာလုပ်ငန်းအကြောင်း ဆက်လက်ဖော်ပြသည်မှာ နံနက်ပိုင်း ဘာသာရေးဆိုင်ရာသင်ကြားမှု၊ အတန်းတတန်းတွင်းရှိကျောင်းသားအရေအတွက်၊ လစဉ်စာမေးပွဲများ၊ ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်၊ လေ့ ကျင့်ခန်းစာအုပ်များ၏စျေးနှုန်းများ၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကျောင်းအရေအတွက်၊ ကျောင်းသား အရေအတွက်နှင့် ဆရာ/ဆရာမ များအရေအတွက်၊ ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရကျောင်း၏ကျောင်းသားများ ဗဟုသုတကြွယ်ဝအောင်လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်မှု အတိုင်းအတာတို့ကိုပြောကြားသည်။ (၄၈မိနစ် မှ ၁ နာရီ ၄ မိနစ်ထိ)
Identifier: Ancienne cote: crdo-BER_1964_BUR_023_A
Identifier (URI): https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-34fe9245-dc3d-3010-ba09-d7bf764b0c96
Is Format Of (URI): https://cocoon.huma-num.fr/data/bernot/masters/BER-1964-BUR-023-A.wav
Is Required By (URI): oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-b50988fd-47ea-42e8-8c5b-1851e661c3ac
Citation: Bernot, Denise (researcher); Candier, Aurore (consultant); Centre national de la recherche scientifique (sponsor); Institut national des langues et civilisations orientales (sponsor); Vittrant, Alice (depositor); Labex ASLAN (CNRS, ENS, Université Lumière Lyon 2) (sponsor); Khin Khin Zaw (consultant). 1964. Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale.